ओलीले संसद बिघटन गरेर नेपाली जनताले सडकबाट लडेर अर्जेको गणतन्त्र माथि प्रहार गर्ने ध्रिष्टता गरे : कांग्रेस महोत्तरीका जिल्ला सचिब पाठक – Shirish News
नेपाली कांग्रेस महोत्तरीका जिल्ला सचिब शम्भूनारायण पाठक संग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
अहिले जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले हठात रुपमा संसद बिघटन गर्नु भयो यसमा तपाईँ को भनाई के छ ?
-हेर्नुस, वर्तमान अवस्थामा नेपाली राजनीति दुई कित्तामा बिभाजित भएको प्रस्ट नै छ । पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ले निर्वाचित संसद बिघटन गरेको घटनालाई संबैधानिक भनिरहेका छन् । दोस्रो, उक्त घटना लाई असंबैधानिक भनी अहिले सडकमा उत्रेका छन् । ओली ले संसद बिघटन मात्र गरेको छैन् अपितु नेपाली जनताले सडकबाट लडेर अर्जेको गणतन्त्र माथि प्रहार गर्ने ध्रिष्टता गरेका छन् । पहिलो कित्तामा ओली र उनी जस्ता प्रतिगमनकारीहरुको भिड देखिन्छ भने दोस्रो कित्तामा प्रगतिशिल बिचारधारा भएका साथै संबिधानवादमा विश्वास गर्ने देशका सम्पूर्ण जनता उभेका छन् । ओलीको असंबैधानिक कदमको बिरोध जारी छ । हामीले हेर्दै आएको संसदिय अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा संसद बिघटन पहिलो पटक गरिएको छैन् । तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संबिधानको मर्मानुसार नयाँ संबिधान अन्र्तगत संसद बिघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छैन् । झन दुई तिहाईको जगमा बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्नु भनेको कसैको इसारामा देशमा राजनीतिक अस्थिरता निमत्याउने योजना तहत गरिएको बुझिन्छ ।
रह्यो कुरा नेपाली कांग्रेस को भने कांगे्रसले ल्याएको संबिधानको रक्षाका लागि हामीले फेरी एकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छु म । संबिधान बनाउँदै गर्दा त्यसबेलाको परिस्थितीमा मधेशका जनतामा थोरै बिमत्ती रहेको सत्यलाई नकार्न नमिले पनि नेपाली कांग्रेसले संबिधान संसोधनको प्रयाश समेत गरेको थियो । त्यसबेला तत्कालिन नेकपा एमाले संसोधन हुन दिएको थिएन । र अहिले आएर प्राप्त उपल्ब्धीलाई समेत समाप्तीको कगारमा लगेर यो कम्यिुनिस्टहरुले राखीदिएको छ । संघियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकता को महत्वलार्य ओली ले कार्यान्बित गर्नु पर्ने समयको मागलाई नजरअन्दाज गरेको छ ।
तपाई ले चुनावको कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेस दुई कित्तामा बिभाजित भएको छ । पुर्नस्थापना र चुनाव । तपाई को भनाई के छ ?
-नेपाली कांग्रेस अहिलेको मुद्दामा बिभाजित भएको जस्तो देखिएको होला । नेपाली कांगे्रस एउटा यस्तो पार्टी हो जहाँ बैचारिक स्वतन्त्रता लाई महत्व दिइन्छ । त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो प्रमुख माग भनेको वर्तमान संबिधानलाई सबैभन्दा पहिला रक्षा गर्नुपर्छ । संसद बिघटनको मुद्दा न्यालयमा बिचाराधिन रहेको अवस्थामा ओली ले जसरी अदालतलाई डिकटेट गरिरहेका छन् त्यसरी हामी गर्दै नौ । हामी शक्ति पृथकीकरण र न्यालयको स्वतन्त्रता माथि धावा बोल्नबाट परहेज गर्छौ ।
हो, रह्यो कुरा की अब नेपाली कांगे्रसले के गर्छ भने कुरा हाम्रा केन्द्रिय नेताज्यूहरुले सामुहिक निणर्य लिनु नै हुने छ । मेरो ब्यक्तिगत मत सोध्नुहुन्छ भने जसरी कम्यिुनिस्टहरुले जनताले दिएको बिशाल मतादेशलाई अपमान गरेको छ त्यसको क्षतीपूर्ती र कम्यिुनिस्टलाई सबक सिखाउनको लागि भएपनि यथासम्भव चुनावमा जाँदा नै उचित होला । इतिहास साक्षी छ, जबजब कम्यिुनिस्टहरुले देश बिगार्न खोज्यो तबतब नेपाली कांग्रेसले नेपालमा लोकतन्त्र र संबिधानवादको रक्षा गर्दै आएको छ । यो नेपाली कांग्रेसको मूल मान्यताभित्र पर्छ ।
नेपाली कांग्रेस ले गर्नसक्नु पर्ने आन्दोलन कहाँ देखिएको छ त ? कांग्रेस बिभाजित जस्तो देखियो नी त ?
– नेपाली कांगे्रस मो मूल नारा भनेको लोकतन्त्र, समाजवाद र …. भएता पनि यसको कार्यान्वयणको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेका मा दुई वटा खेमा रहँदै आएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन् । तर देश हितको सवालमा नेपाली कांग्रेस जहिले पनि गोलबद्ध नै भएको छ । आज पनि एक ढिक्का भएर उभिएका छौ । रह्यो कुरा आन्दोलनको । संसद बिघटनको मुद्दा अदालतमा बिचाराधिन रहेकै कारणले गर्दा हाम्रो आन्दोलनको ताप कमसल देखिएको हुनसक्छ तर राप अधिक छ । अदालतको आदेश के आउँछ त्यसै अनुरुप हामीज अघि बढ्ने छौ ।
व्यवहारिक पक्ष के हो भने चुनावमा नजाने हो भने कांगे्रसको औचित्य मिट्न सक्ने सम्भावना छ । मानौ संसद पुर्नस्थापना भइहाल्यो । अनि के नेपाली कांगे्रस ओली संग मिलेर सरकार बनाउँछ त ? कदापी होईन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त राजनितिक उपल्ब्धीहरु लाई सखाप पार्ने यत्न गरिरहेका ओली समुह संग मिल्ने कुरा नै भएन । प्रचण्डजी हरुको बोली को ठेकान नै हुँदैन् । मधेशवादी दलसंग सहकार्य गर्ने आवश्यकता समेत बोध हुँदैन् । अहिले जसरी नेपाली कांगे्रस संग आम नेपाली जनताले आशा र भरोसा देखाइ रहेका छन् यस्तो अ वस्थामा यदी हामी एक्लै चुनावमा जाने हो भने जनताले हामीलाई पत्याउने सम्भावना ब्याप्त छ ।
ओली संग जान नसकिने कुरा गर्नुभो । अनि तपाईको सभापति आफै ओलीले संचालन गर्दै आएको सत्ताको मतियार कै रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
– हाम्रा सभापति सत्ताको मतियार हुनुभयो भन्ने आरोप तिर म जान चाहन्न । तर सदनमा कम्यिुनिस्ट सरकारले गरेका गैरलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरुको बिरोध नेपाली कांग्रेसले निरन्तररुपमा गर्दै आएको थियो । जनसरोकारको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर नेपाली कांग्रेस सदन देखि सडक सम्म आफ्नो उपस्थिती देखाउँदै आएको थियो र लोकतन्त्र र संबिधानवादको पक्षमा नेपाली कांग्रेस जहिले पनि लड्ने नै छ । पक्कै पनि हामी बाट सामान्य त्रुटी समेत भएको छैन् यदी मैले भने हो भने म गलत हुनेछु । तर समग्रमा नेपाली कांग्रेसब बाहेक कसैले पनि गणतन्त्रको रक्षा गर्ने ल्याकत समेत राख्दैन । तसर्थ नेपाली कांगे्रस चुनाव मा एक्लै जानुको बिकल्प छैन् । नेपाली जनताले अर्जेर ल्याएको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातीक व्यवस्था लाई जोगाउन नेपाली कांग्रेस लाई आम नेपाली जनले दुई तिहाई दिन सक्ने सम्भावनाको आयतन फराकिलो देख्छु म ।
संसद बिघटनको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्छ होला त ?
– ओलीको कदमले वर्तमान राजनीतिक संरचनामाथि नै धाबा बोलेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारमा यसको असर नपर्ने प्रश्न नै भएन । प्रदेशहरुमा ओली र माधव समुह बीच बिभाजनको रेखा गहिरी सकेको छ । यदी नेकपा बिभाजनले औपचारिकता पायो भने प्रदेशहरुमा पनि सरकार फेरबदलको अभ्यासहरु चल्ने नै छ ।
तर मुल प्रश्न यो हो की जसरी ओली ले संबिधान माथि नै हमला गरेको छ त्यसले गर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको संबिधानको रक्षा गर्नु हो । र नेपाली कांग्रेसको ध्यान अहिले संबिधान बचाउनमा केन्द्रित रह्नु पर्छ, छ पनि ।
पछिल्ले चुनाव जस्तै मधेशवादी दल संग तालमेल गरेर जाने सम्भावना कतिको छ ?
-वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको गहन र उचित मूल्याङ्कन गरेर हामी अघि बढ्छौ । मधेशवादी दलसंग मिलेर चुनावमा जाने सम्भावना देख्दिन म । पछिल्लो चुनावको बेला खासखास सिटमा बिभिन्न दबाबका कारण चुनावी तालमेल गरिएको थियो र चुनावी गठबंधन जस्तो केही भएको थिएन ।
वर्तमान राजनीतिक घटनाले नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा कतिको असर पर्नसक्छ त ?
-हिँजो मात्र नेपाली कांग्रेसका उप-सभापति बिमलेन्द्र नीधिले भनि सक्नुभएको छ की अहिलेको राजनीतिक उहापोहको अवस्थामा महाधिवेशन भन्दा पनि चुनावमा जानु पर्ने सम्भावना छ । उहाँको बिचार संग सहमती जनाउँदै म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली कांग्रेसले क्रुर पंचायती व्यवस्था होस या पछिल्लो मधेश आन्दोलन- हामीले खुला चौरमा पनि महाधिवेशन गरेको स्वणर्िम इतिहाँस छ । तसर्थ, महाधिवेशनमा जान पनि सकिन्छ । र यसमा हाम्रो पार्टी नेतृत्वले के गर्नुहुन्छ हामी त्यसरी नै जाने हो ।
बिमलेन्द्र नीधि को चर्चा गरिहाल्नु भयो । तपाई लाई के लाग्छ यदी महाधिवेशन हुने हो भने नीधीजी सभापतिमा भिड्नु हुन्छ ?
-यो प्रश्नको उत्तर सबैलाई थाहा छ । सामान्य जस्तै भइसकेको छ यो प्रश्न र यसको उत्तर पनि । बिमल दाजु समापतिमा भिड्ने मात्र प्रश्न कहाँ छ र । उहाँ आउँदो महाधिवेशनबाट सभापति बन्नु हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौ । बिमल दाजु सभापति बन्ने हो भने यसले हिमाल, पहाड र कांग्रेसको गढ मानिने मधेशमा समेत नेपाली कांग्रेस रिभाइव हुनेछ । देशमा र खासगरि मधेशमा बिमल दाजु प्रति देखिएको सदभावले म ढुक्क का साथ भन्न सक्छु की हाम्रो आउँदो सभापति बिमलेन्द्र नीधि नै बन्नु हुनेछ । पार्टीमा अन्य शिर्ष नेताहरुले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ ।